ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ Xuzhou Lvke စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ ကုမ္ပဏီတွင်းရှိ လိုင်းတစ်လိုင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထံ သွားရောက်လေ့လာစုံစမ်းခြင်းနှင့် လဲလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲခန်းမနှင့် ဇောင်နိုင်ငံ a. .
အိမ်နောက်ဖေး သိုးစုများနှင့် ပတ်သက်သော အဖြစ်များသော ပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုသည် ငှက်များအတွက် ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ချို့တဲ့မှု ဖြစ်စေနိုင်သော ချို့တဲ့သော သို့မဟုတ် မလုံလောက်သော အစာကျွေးခြင်း အစီအစဉ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များသည် ကြက်အစားအစာအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး ဖော်စပ်ထားသော အစားအစာကို မကျွေးပါက ...
တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ တိရစ္ဆာန်ဆေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ စက္ကူဖြူစာတမ်းကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အစားအစာ ဘေးကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာသော မွေးမြူရေးအတွက် ကမ္ဘာ့လိုအပ်ချက်များ တိုးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ အထူးသဖြင့် အစားအသောက်များတွင် ပဋိဇီဝဆေး တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားမှုများ၊ မွေးမြူစဉ်အတွင်း ပဋိဇီဝဆေးကန့်သတ်ချက်များ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများတွင် ပဋိဇီဝပိုးမွှားများ မကျန်ရှိတော့ခြင်း၊
ပဋိဇီဝဆေးများ သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပါ၊ Hebei လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပါ။ခုခံမှု လျှော့ချရေး လုပ်ဆောင်ချက်
နိုဝင်ဘာလ 18-24 ရက်သည် 2021 ခုနှစ်တွင် "အဏုဇီဝဆေးများဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရက်သတ္တပတ်" ဖြစ်သည်။ဤရက်သတ္တပတ် လှုပ်ရှားမှု၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ “အသိပညာ တိုးပွားရေးနှင့် ဆေးယဉ်ပါးမှု တားဆီးရေး” ဖြစ်သည်။ပြည်တွင်းကြက်မွေးမြူရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်ဆေးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ ကြီးမားသောပြည်နယ်တစ်ခုအနေဖြင့် Hebei သည် ...
ဖောက်သည်များအတွက် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ခြင်း-Hebei Weierli နှစ် 20 ပြည့် နှစ်ပတ်လည် ချီးမြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို အခိုင်အမာ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း။
အနှစ် 20 ထက်မြက်မှု၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနာဂတ်၊ သင်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ခြင်း - Weierli မှလှူဒါန်းသော ပထမအသုတ် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို သုံးစွဲသူများထံ ပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်။Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group Co., Ltd. ပေါင်းစည်းထားသော အဖွဲ့၏ အရင်းအမြစ်များ၊ ပထမအသုတ် 500 ဃ...
China Qilu ခရိုင် ဖောက်သည် Weierli Animal Pharmaceutical Group သို့ လာရောက်လည်ပတ်သည်။
ပထမဦးစွာ Weierli Animal Pharmaceutical Group ၏ အလှည့်ကျဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Sun Ru သည် ကုမ္ပဏီ၏ အနှစ် 20 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဗျူဟာကို "Journey under the New Track" ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် တင်ပြပြီး မျှဝေခဲ့ပါသည်။အဖွဲ့ '...
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသည် လုပ်ငန်းတိုင်း၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဖောက်သည်များအတွက် အကာအကွယ်၊ ကတိကဝတ်နှင့် တာဝန်ဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အတွင်း Weierli Group သည် "မူလသဘောကိုအသုံးပြု၍ ကောင်းမွန်သောဖန်တီးမှုကိုဖန်တီးခြင်း" ဟူသော ထုတ်ကုန်သဘောတရားကို အမြဲလိုက်နာခဲ့သည်။
အနှစ် 20 ထက်မြက်မှု၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနာဂတ်ကိုဖန်တီးပါ။
ဇူလိုင်လ 11 ရက်နေ့တွင်၊ ချန်ပီယံအသင်းများနှင့်တစ်ဉီးချင်းစီကိုချီးမွမ်းအားပေးရန်အတွက်, သူရဲကောင်းများစုဝေးပွဲ - Waili Group ၏ 19th (Qinghai) သူရဲကောင်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့ပြီး ခရီးသစ်၏ ဓာတ်ဆီဆိုင်လည်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယနှစ်ဝက်...
VIV အာရှ 2019
ရက်စွဲ- မတ်လ 13 မှ 15 ရက်၊ 2019 H098 Stand 4081
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းခွင်သုံးအပင်များနှင့် စက်ကိရိယာများရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအသစ်တစ်ခုသည် 2018 ခုနှစ်အတွက် ဥရောပ FDA နှင့် ကိုက်ညီမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတိရစ္ဆာန်ဆေးကုထုတ်ကုန်တွင် ဆေးထိုးခြင်း၊ အမှုန့်၊ အကြိုရောစပ်မှု၊ တက်ဘလက်၊ ပါးစပ်မှဖြေရှင်းချက်၊ သွန်းလောင်းသည့်အရည်နှင့် ပိုးသတ်ဆေးတို့ပါဝင်သည်။ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စုစုပေါင်းထုတ်ကုန် ...
Weierli Group သည် 2001 ခုနှစ်၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးများထုတ်လုပ်သည့် ထိပ်တန်း5အကြီးစား GMP ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်ပို့ရောင်းချသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဌာနခွဲစက်ရုံ4ခုနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီ 1 ခုရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်း 20 ကျော်သို့ တင်ပို့ထားသည်။အီဂျစ်၊ အီရတ်နှင့် ဖီလီတို့တွင် အေးဂျင့်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် အဆောက်အဦများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ပါဝင်ပါသည်။သို့သော်လည်း အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးအပေါ် အာရုံစိုက်ရုံသာမက ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန် နည်းလမ်းများလည်း ပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အောက်ပါအခြေခံမူများကို လိုက်နာပါသည်- 1. Customer Focus 2. ...